သက်ဝေ: ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ
Posted by သက်ဝေ at 9:27 AM
Younggun March 28, 2008 at 9:51 AM
ကြက်ဥကတော့ဗျာ..ကျနော်တို့ ငတ်ပြတ်နေတုန်းက အသက်ကယ်ဖူးပါရဲ့
တန်ခူး March 28, 2008 at 3:30 PM
တနေ့တနေ့ဘာချက်ရမလဲ ဦးနှောက်ခြောက်နေတာ။ သက်ဝေဆီက ကြက်ဥငါးပိချက်နည်းလေးခိုးသွားပြီ။ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါသက်ဝေ။ ကြက်ဥကို မုန်လာပွင့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဟင်းနုနွယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆူးပုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗူးရွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရော ကြော်လဲ စားလို့ကောင်းတယ်။ (သက်ဝေ ဒီမှာ ဘဲဥရှာတွေ့တယ်။ ဘယ်ကဝယ်လဲဟင်။ တို့ရှာမတွေ့လို့။)
nu-san March 29, 2008 at 12:02 AM
အဟား.. သက်ဝေကတော့ ကြက်ဥအကြောင်းရေးထားတာ တကယ်ကိုပြည့်စုံတာပဲ.. တချို့နည်းတွေဆို သိဘူးရယ်.. အလွယ်နည်းတွေ မှတ်ထားရမယ်...
ကျမကတော့ ပြုတ်ပြီး မသုတ်စားတတ်ဘူး။ ဗိုက်တအားဆာလာပြီဆိုရင် ကြက်ဥ ၂ လုံးလောက်ပြုတ်ပြီး ဆားနဲ့ ဒီအတိုင်းစားလိုက်တာ.. တခြားနည်းတော့ မရှိတော့ပါဘူးသက်ဝေရာ.. နည်းလည်းတော်တော်စုံနေပါပြီ။ ငပိချက်နည်းလေးတော့ မှတ်သွားတယ်။ ကြုံမှ ချက်စားကြည့်ရမယ်.. :D
myatnoe March 29, 2008 at 6:35 AM
တရုပ်ပုံစံ မဆလာထည့် ရှောက်ရွက်ထည့်ပီး ဟင်းချိုတခွက်ရသေးတယ်အမ။
အမပြောတဲ့နည်း တချို့က မသိဘူး။ ချက်စား၇မယ်။
ကျေးဇူးပါပဲ။ မတန်ခူးပြောသလို အမ ပန်းကော်ဖီကြော်ရင်လဲ အပေါ်က အုပ်လို့ရသေးတယ်။
မြတ်နိုးမှာလဲ ကြက်ဥအရမ်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းရှိတယ်။
pandora March 29, 2008 at 2:48 PM
ကြက်ဥ ဘဲဥ သိပ်ကြိုက်
အဲဒီထဲက ချက်နည်းနဲ့ ဟင်းတွေ အကုန်ကြိုက်တယ် ရှလွတ်..
ရွှန်းမီ March 29, 2008 at 7:13 PM
ကြက်ဥ ချက်နည်းတွေ မှတ်သွားတယ်..
နောက်တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ကလေးချက်တဲ့ ကြက်ဥဟင်း ပေါ့ မသက်ဝေ =) . .
ငရုတ်သီး ကြက်သွန်နဲ့ ဆီသတ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ စိပ်ထည့်ပြီး ငါးပိချက်လို လုပ် (ငါးပိ၊ ငံပြာရည်၊ ပုစွန်ခြောက်
ကြိုက်တာထည့်)။ ခရမ်းချဉ်သီး ကျက်ရင် ကြက်ဥ အစိမ်းတွေ ဒီအတိုင်း ဖောက်ထည့်။ အနှစ်လုံး လေးတွေ
ပုံမပျက်အောင် ထားပြီး အကာကို ခရမ်းချဉ် အနှစ်နဲ့ မွှေ (ချက်နေတုန်းတော့ တော်တော် စိတ်ရှည်ရတယ်)။ တူနဲ့ မွှေတတ်ရင် တူသုံးတာ ပိုကောင်းတယ်။ ယောက်က ကြက်ဥနှစ်လေးတွေ ပေါက်မယ့် အန္တရာယ် ရှိတယ်။ :) . . ပြီး
အနှစ် ပေါ်ယံတွေ တင်းသွားရင် ကြက်သွန်မြိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ စပါးလင် နုနု ဖြစ်ဖြစ်၊ နံနံပင် ဖြစ်ဖြစ် အုပ်ပြီးချ။
ကြုံရင်လဲ ချက်ကျွေးပေါ့နော် =)
mothonlay March 29, 2008 at 8:12 PM
သက်ဝေ March 31, 2008 at 3:03 PM
Younggun - ဟုတ်ပါတယ်။ ကြက်ဥက တော်တော်လေး အကူအညီရပါတယ်။
တန်ခူးရေ... ကြက်ဥချက်နည်း အသစ်လေးတစ်ခု အတွက် ကျေးဇူး။ ဘဲဥကို NTUC, Giant နဲ့Wet Market တွေမှာ ၀ယ်လို့ရတတ်ပါတယ်။ NTUC နဲ့Giant မှာ အမြဲ မရရင်တောင် Wet Market မှာတော့ အမြဲလိုလို ရတတ်ပါတယ်။
နုစံ... ကြက်ဥတွေ တစ်အားလဲ အများကြီး မစားနဲ့ နော်။ Weight တွေ တက်လာလိမ့်မယ်။
့မြတ်နိုး... ကြက်ဥဟင်းချိုတော့ တစ်ခါမှ မချက်ဖူးပါ။ နည်းအသစ်လေးတစ်ခု အတွက် ကျေးဇူး။
ပန်ဒိုရာ... ချက်ကျွေးမယ်လေ၊ ဘယ်တော့လာစားမလဲ.. ပြော။
ရွှန်းမီ... ဒီတပါတ် ရုံးပိတ်ရက်ကျရင် ညီမပြောတဲ့ နည်းလေးအတိုင်း ချက်ကြည့်ပါအုံးမယ်။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူး...။
ကိုမုတ်သုန်... မတွေ့ တာ အတော်ကြာ..။ ဘယ်တွေပျောက်...။
ဂျေ April 1, 2008 at 4:05 AM
ကြက်သွန်နီကို အတုံးလေးတွေ စိတ် ဆီသပ် အကြည်ရောင်ပြောင်းလို့ ကျက်ရင် ခနဆယ်ထား စိတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့ ချက် ခရမ်းချဉ်သီးကို အနစ်ဖြစ်အောင် ယောင်းမနဲ့ ဖိပေး။ အရည်လိုဖြစ်ပြီဆိုရင် ကြက်သွန်နီ ပြန်ထဲ့ ၊ ဆား အချိုမှုန့် နဲ့ ငရုပ်ကောင်းထဲ့ပြီး မွအောင် ခေါက်ထားတဲ့ ကြက်ဥရည်ထဲ့ ယောင်းမနဲ့ အဆက်မပြတ်မွှေ။ လုံးဝမကျက်စေနဲ့အားလုံးပစ်ခဲခဲ ဖြစ်ရင် ချ။ ပေါင်မုန့် ထဲ ညှပ်စား (မရေားနီးလိုလို ဘာလိုလို) ကြက်ဥကျက်သွားရင် စားမကောင်းဘူး
My Wonderful Moral Thoughts April 1, 2008 at 5:05 AM
Lovely Post.., I dont even have much ideas about how to use an egg b4.
It's very useful indeed. Thanksalot.
Moe Cho Thinn September 23, 2008 at 1:56 AM
ဒီပို့စ်လေးတော့ အမြဲသိမ်းထားမှပါပဲ။ ကြက်ဥ ငပိချက် တဲ့။ အခုတောင် သွားရည်ယိုတယ်။
ချိုသင်းလဲ ကြက်ဥဆိုရင် အကုန်ကြိုက်တာ အရိုးမပါ၊ အကုန်လုံး စားလို့ရလို့ ထင်ပါရဲ့။
ခုလို အမျိုးမျိုး လုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ ကြက်ဥလေးကို အမှတ်ပေးပြီးရင်း ပေးနေရပြီပေါ့နော်။
ThuHninSee November 10, 2008 at 3:00 AM
A Linn Nyi November 22, 2008 at 10:39 AM
ကြက်ဥ ကြိုက်တယ်။ နောက်တခါချက်ဖြစ်ရင် မချက်ဖူးသေးတဲ့ နည်းနဲ့ စမ်းချက်ကြည့်မယ်။
Hmoo June 8, 2009 at 6:17 AM
Forget about egg..plzz
And stop supporting2eat egg..
အခုမြန်မာပြည်မှာ လည်း ကြက်ဥနဲ့ ဘဲဥ နဲနဲ ဈေးကွာတယ်
ဥကို သုတေသန လုပ်ရရင် ကွာတယ်ဗျ ဘဲဥ အကာ က နဲနဲမာတယ် ဟင်းချက်ရင် ပိုကောင်းတယ် ကြက်ဥ အကာက ပျော့တယ် ကျနော် က မကြိုက်ဘူး